Zvakanakira zvemotomatiki yekuisa machina kunyoresa musoro
na admin on 20-06-12
Iyo inonzi otomatiki yakadhindisa machina yekunyora nyowani musoro, kazhinji inonzi seyakakwira dhijidhiji yemagetsi ekutsikisa machina, kunyanya servo (PLC) kutonga, dzakasiyana-siyana dzekushanda parameter uye semi-otomatiki yekunyora manzwi zvakagadziridzwa. Kudhizaina manzwi (1) Iyo semi-otomatiki yekunyora ma ...
Mashandisiro aunoita ropa
Ropa tsono rinogona kukamurwa kuita: 1. Subcutaneous yeropa inosanganisa sindano: kazhinji-mativi matatu-akapetwa sindano uye simbi solid solid sindino; Pierce ganda rinobva kure kana kuti mudzi wegumbo retsoka kuti utore ropa. Masero eropa uye biochemical, nhoroondo, hutachiona, hutachiona, uye ...
Kugadziriswa, ruvara, kushandiswa uye kurongeka kweropa kudhirowa kwemidziyo yekushandisa
Vuta ropa kuunganidza vacuum yakaipa kudzvanywa kweropa kuunganidzwa, kubuda kwehuwandu hukuru hwekushandisa michina uye kuongororwa kwazvino nezvekurapa kwezvinodiwa zvekuchengetedza ropa, kwete chete hunyanzvi hwekuunganidza ropa rinodiwa, asiwo zvinodiwa zve vacuum yeropa ...
Kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva panguva yeCoronavirus
na admin on 20-05-08
Shijiazhuang Kang Weishi Kugadziriswa kwekurapa chigadzirwa chitsva chinonzi Disposable Virus Sampling tube, izvi zvigadzirwa zvakakodzera kuunganidzwa, kutakura uye kuchengetedza hutachiona samples. ...
Vacuum ropa rekuunganidza maitiro
na admin on 20-04-20
Coagulation mudziyo → ropa muitiro chubhu → ropa sedimentation tube → biochemical tube. Ongorora: Iyo yeropa inoitwa chubhu inofanirwa kuunganidzwa mune yechipiri chubhu nenzira chero ipi (iyo yeropa tube ndiyo yechitatuhubhu apo tsika yeropa ndiyo inonyanya kufarirwa), kunze kwechinhu chinoitika cheropa. Yese ropa rekuunganidza tube ...
Dzimwe nguva hemolysis inoitika panguva yekuongororwa kweropa, chii chikonzero?
1. Nekuti mitsipa yeropa yakaonda kwazvo uye kuyerera kweropa haina kutsvedza, kudzokororwa kwechido chehurefu kwakanyanya, zvekuti masero eropa anoparadzwa uye hemolyzed; 2. Kana iropa rakabatanidzwa muchubhu yekuunganidza ropa, dzvinyiriro yacho yakanyanya, uye haina kunonoka kupinda ...